Bakool: Cudur ku dhacaya geela iyo ariga oo la baarayo - Radio Ergo
(ERGO) – Xoolo dhaqatada ku nool deegaannada Rabdhuurre iyo Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa ka cabanaya cudur ku dhacaya geela iyo oo ariga tan iyo bishi May ee sanadkan, kaasi oo wali aan la aqoonsan.
Nasro Cabdi Maxamed oo ari ku dhaqata deegaanka Aato ayaa sheegtay in 24 neef oo ari ah, uga dhinteen muddo sedex toddbaad ah. Waxay xustay inay ku aragtay calaamado ay ka mid yihiin qandho aad u kulul, neefka oo aan socon karin iyo neefka oo dhimaya afar iyo labaatan saac gudahood.
“Xoolo dhaqtada waxay ku noolyihiin caanaha, hilibka iyo iibka xoolaha, laakiin hadda qof kasta wuxuu ka cabsanayaa cudurka, qofna ma iibsanayo lamana gadi karo caanahooda,” ayay tiri Nasro.
Waxay intaa ku dartay in ay ka joojisay carruurteeda caanaha ariga iyo hilibkaba, taas badalkeedana ay siiso kalluunka gasacadeysan iyo caana booraha si cudurkan garan-waaga ah uga badbaadiso qoyskeeda.
Qoyska Nasro ayaa abaaraha soo noqonday tan iyo sanadki 2017-2020, ku waayay lidan neef oo geel ahaa. Waxay aad uga welwelsantahay haddiii aan cudurakn waxba laga qaban inay ku waydo ariga.
Cali Diiriye Cali oo geel iyo ari ku dhaqda deegaanka Ceel-magad ayaa sheegay in lix neef oo geel ah, ay uga dhinteen cudurkan tan iyo dhammaatki bishi May. Hadda waxaa u haray oo 4 neef oo geel ah, balse wuxuu aad uga welwelsan yahay 150 neef oo ari oo uu haysto halka ay ku dambayn donaan haddii uu cudurku sii jiro.
“Waxaan noo irmaanaa geela oo ariga caano ma la ahayn abaarta dheeraatay awgeed, qaar ka mid ah dadka waxay waayeen dhammaan xoolihi ay lahaayeen cudurkan dartsiis, nolasha way adagtahay,” ayuu yiri Cali.
Wuxuu intaa raaciyay in iibka xoolaha uu istaagay cudurkan awgiis, oo sedexdi toddobaad ee la soo dhaafay uusan iib gayn hal neef xataa.
Axmed yuusuf Carab oo ah dhaqtar xoolaha ah, joogana degmada Yeed, ayaa sheegay in cudurkan aan wali la garan noociisa, ayadoo xoolo dhaqatada ay isticmaalayaan daawooyin antibaayootig ah, kuwaasoo ay isleeyihiin xanuunka ayay wax ka tarayaan.
Wuxuu sheegay in deegaanno uu booqday uu ku soo arkay calaamadaha cudurka neefka oo saxarada ay dhiig tahay, matag iyo kuwa kale.
Wasaaradda xannaanada xoolaha ee Koonfur Galbeed oo samaysay sahan ku saabsan cudurkan bishan Juune, ayaa sheegtay in aan la aqoonsan sidaa darteedna aan wax daawo ah la siin karin xoolaha. Wasaaradda ayaa sheegtay inay ku samayn doonto baaritaan lagu gaanayo nooca cudurkan.
Sulub Cali Loxos, ayaa radio Ergo u sheegay inay diiwaan galiyeen dhimashada 233 neef oo geel ah.